Blazer ဒါမှမဟုတ် အမေရိကန်လား။ - အဝတ်တစ်ထည်စီ ဝတ်ဆင်ပုံ ကွာခြားချက်များ | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Blazer ဒါမှမဟုတ် အမေရိကန်လား။
Alicia tomero | 11/06/2022 11:55 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ပုံ, သဘောထားတွေ
သူကအဖြစ် blazer၊ blazer ကဲ့သို့ ဂျာကင်အင်္ကျီဘုံ၌ ရှိကြကုန်၏။ အဓိပ္ပါယ်တူ၊ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ လူတိုင်းမှာ အယူအဆတစ်ခုစီရှိပါတယ်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကြောင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့် ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ခြင်းကြောင့် တစ်ဦးစီအား ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသော ဝေါဟာရများသည် ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြသည်။
Blazer နဲ့ Jacket ကြားမှာ ရွေးချယ်ရမှာလား။ နှစ်ခုကြားက ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ အထက်ဖော်ပြပါ မြင်ကွင်းကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ယနေ့ မရေမတွက်နိုင်သော စတိုးဆိုင်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မှတ်မိနိုင်သော အသေးစိတ်အချက်အလတ်အသေးစားများကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ခြားနားချက်ကတော့ ခေတ်မီပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ နှင့် အကြား ကြော့နှင့်တရားဝင်။
blazer သို့မဟုတ် ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဖော်ပြရန် ယေဘူယျအမည်အဖြစ် ဂျက်ကက်အသုံးအနှုန်းကို ကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ကို A မှပြန်လည်ပုံဖော်ထားသည်။ အင်္ဂလန်ရိုးရာ စက်ချုပ်၊ ၎င်းကို နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကသို့ တင်ပို့ခဲ့ပြီး Americana အမည်ကိုလည်း ၎င်းနှင့်တွဲလျက် ရှိသည်။
ဂျာကင်အင်္ကျီသည် ဤအမည်နှစ်ခုကို ပေးသည့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ ဒီနေ့တော့ ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းဘဲ အင်္ဂလန်မှာမွေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်ကို တင်ပို့ခဲ့တာလဲ။ သူ့ရဲ့ ဒီဇိုင်းက အမေရိက. ထိုနေရာတွင် ထူးခြားပြီး တရားဝင်အ၀တ်အထည်အဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Americana ၏အမည်ကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဂျာကင်အင်္ကျီဒီဇိုင်းအချို့ကို တစ်ပိုင်းတည်း ဖန်တီးထားသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။
1 Blazer ဒါမှမဟုတ် အမေရိကန်လား။
ထူးထူးခြားခြား လူနှင့်အခိုက်အတန့်ပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း blazer သည် အလွန်ကြော့ရှင်းသော်လည်း ၎င်းသည် အားကစားဆန်သော ထိတွေ့မှုရှိသည်။ ဂျာကင်အင်္ကျီသည် ပို၍ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး တင်ဆက်မည့်ပွဲ သို့မဟုတ် အခိုက်အတန့်ပေါ် မူတည်သည်။
Blazer နှင့် ဂျာကင်အင်္ကျီ ဤအရာများသည် ဂျာကင်အင်္ကျီ သို့မဟုတ် ဘလာဇာကို အမြဲဝတ်ဆင်ထားသော်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ရှိနေခဲ့သော အယူအဆနှစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်နှင့် ကွဲလွဲချက်များကို ၎င်း၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် အထည်ဖြတ်ပိုင်းတို့တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ၎င်းကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဂျာကင်အင်္ကျီသည် အလွန်တရားဝင်သော ၀တ်စုံဖြစ်သည်။. ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် အင်္ဂလန်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အင်္ကျီစကတ်များကို ဖြတ်တောက်ကာ ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် အင်္ကျီကို ဖန်တီးသည်။ သယ်ရပိုလွယ်တယ်၊ ပိုအလုပ်လုပ်တယ်။ ကျက်သရေမပျက်စေဘဲ၊
XNUMX ရာစုတွင်၎င်းကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ပိုအံဝင်ခွင်ကျ ဂျာကင်အင်္ကျီ ၏နာမနှင့်အတူ "ဝတ်စုံအင်္ကျီ" မင်းမျိုးမင်းနွယ် Beau Brummell ကြောင့် (Brummell ရေမွှေးက သူ့ရဲ့ ပုံနှိပ်စက်ကို သယ်ဆောင်လာပါတယ်) သူ့ရဲ့ဖက်ရှင်ဟာ အဲဒီအချိန်က ဖက်ရှင်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာကြောင့် သူ့ရဲ့ဖက်ရှင်ဟာ ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ ဒီဂျာကင်အင်္ကျီစတိုင်ကိုလည်းသိပါစေ။ ၎င်းတို့သည် ခလုတ်သုံးခုမှ နှစ်ခုသာကျန်ခဲ့ပြီး အချို့သောအဖွင့်ကို အထည်၏တစ်ဖက်စီရှိ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအဖွင့်နှစ်ခုဖြင့် အစားထိုးထားသည်။
စပိန်အတွက် ဒီအကျီ င်္ model လေးရောက်ပါပြီနော်။ XIX ရာစု ၎င်းသည် ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်အရ အမေရိကန်ဂျာကင်အင်္ကျီအဖြစ် နှစ်ခြင်းခံထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တရားဝင်စတိုင်ထွက်ပေါ်လွင်, အတူ အနက်ရောင်ခလုတ်နှစ်ခုနှင့် ခေါက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံး. ဤအမေရိကန်ဂျာကင်အင်္ကျီသည်ဘောင်းဘီနှင့်လိုက်ဖက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးဝတ်စုံကိုတရားဝင်စေသည်။
၎င်းသည် ပြိုင်ပွဲ သို့မဟုတ် အခမ်းအနားကဲ့သို့သော အထူးနှင့်တရားဝင်ပွဲများအတွက် စံပြအထည်ဖြစ်သည်။ ဤအထည်အမျိုးအစားသည် ပထမခလုတ်ကို ချိတ်ထားခြင်းဖြင့် ဝတ်ဆင်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို ဘောင်းဘီနှင့်လိုက်ဖက်ရန် တရားဝင်အ၀တ်အထည်အဖြစ် တပ်ဆင်ထားသော်လည်း ၎င်းကို တရုတ်ဘောင်းဘီ သို့မဟုတ် ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ တစ်ဦးချင်းနှင့် အနည်းငယ်ပို၍ အလွတ်သဘောလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်ရှိသည် ၎င်း၏ဇာစ်မြစ် ဤအချက်အလက်မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို ပို၍ ပြိုင်ကားဆန်သော အရာဟု ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလည်းကြော့, ဒါပေမယ့် ပိုမိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးထိတွေ့မှုနှင့်အတူ. ၎င်း၏အစတွင်၎င်းကိုသယ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ခွဲခြားခဲ့သည်။ သတ္တုခလုတ်များနှင့် patch အိတ်များ။ တစ်ချို့က ရင်ဘတ်အိတ်ကပ်မှာ အဆောင်အယောင်တစ်မျိုးမျိုး ဆောင်ထားကြပြီး အင်္ဂလန်က ခရစ်ကက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝတ်ဆင်ရမယ့် အဝတ်အစား အမှတ်အသားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
XNUMX ရာစုက အင်္ဂလန်ဘုရင်မဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မသည် အမေရိကန်လူမျိုးကို အခြေခံ၍ ဂျာကင်အင်္ကျီကို ဖန်တီးလိုခဲ့သည်။ ပိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ အထည်တွေနဲ့ ဖန်တီးထားပါတယ်။တူညီသောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် patch အိတ်ကပ်နှင့်အတူ။ ဤပုံစံဖြင့် ၎င်းသည် ပိုမိုပြိုင်ကားပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။
20 ခုနှစ်များတွင် blazer များသည် ခေတ်စားလာခဲ့သည်။ဘောင်းဘီဖြူနှင့် တွဲလျက် ပေါ်လာသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ၎င်းတို့ကို မည်သည့်ဘောင်းဘီ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ပါးလွှာသောစတိုင်၊ မည်သည့်အရောင်နှင့်မဆို ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ပါသည် ပိုပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပုံစံဖန်တီးပါ။.
ဤအကျီနှစ်ခုကို ဆွေးနွေးရန်အတွက် ရှုထောင့်များစွာကို ထောက်ပြရပါမည်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်ရိုးရှင်းသော အသေးစိတ်အချက်များ ရှိရာ၊ အမေရိကန်က ပိုတရားဝင်တယ်၊ အနက်ရောင် ခလုတ်အိတ်နှင့် ခေါက်အိတ်များဖြင့် ဘောင်းဘီနဲ့ သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ blazer က ပိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသောအထည်နှင့် patch အိတ်များဖြင့်။ သူတို့ဟာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပုံစံနဲ့ ပိုသင့်တော်ပြီး ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၌ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ "Blazer ၃ မျိုး ဝတ်ဖို့ စိတ်ကူး" နှင့် "ဂန္ထဝင် ဘလာဇာတွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ပုံရိပ်ကို ဘယ်လိုပုံဖော်မလဲ။"
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » Blazer ဒါမှမဟုတ် အမေရိကန်လား။
အမျိုးသားများအတွက် sideburns အမျိုးအစားများ
အချစ်၏ပုံပန်းသဏ္ဍာန်- ၎င်းတို့ကို မည်သို့ခွဲခြားသတ်မှတ်မည်နည်း။